Karate – Federasionin’i Torkia: « Hitombo ny fifandraisana amin’i Madagasikara » | NewsMada
Karate – Federasionin’i Torkia: « Hitombo ny fifandraisana amin’i Madagasikara »
Par Taratra sur 23/05/2019
Noraisin’ny fikambanamben’ny karateka malagasy, omaly teny amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina, ireo olo-manan-kaja avy amin’ny federasionin’i Torkia, taranja karate-do. Ireto farany izay tonga eto amintsika, hampitombo ny fifandraisana eo amin’ny firenena tiorka sy ny firenena malagasy. Tsy eo amin’ny taranja karate ihany no imasoana amin’izany fa maro ny sehatra hiaraha-miasa, raha ny fanazavan’ny filohan’ny federasionin’i Torkia, i Esat Delihasan. Ho an’ny karate manokana, hanampy betsaka ny mpikatroka malagasy izy ireo, indrindra eo amin’ny lafiny teknika. Io teknika io ihany mantsy, hoy ny fanazavany, ny mampahomby ny atleta ary tsy maintsy tafavoaka rehefa mahalala ny fomba hahafahana mahomby. “Tsy izaho mihitsy ny atao hoe tonga lafatra, saingy haiko ny mamantatra ny fomba sy ny teknika hahombiazana”, araka ny nambaran’ity filohan’ny federasiona tiorka ity. Ity farany izay ao anatin’ny “Top 8” maneran-tany, tompondaka eran-tany, talohan’izao nahatongavany ao amin’ny federasiona izao. Efa mpikambana teo anivon’ny Komitin’ny federasiona iraisam-pirenena ihany koa izy.
Ankoatra an’andriamatoa filoha, i Esat Delihasan, tonga hizara traikefa eto an-toerana ihany koa ny mpikambana ao amin’ny filan-kevitra ara-teknika (conseil technique), i Lèvent Aydemir, sy ny filohan’ny filan-kevitra afovoany ho an’ny mpitsara (conseil central des arbitres), i Ahmed San, izay nanambara fa mila hampiakarina ny lentan’ny mpikatroka malagasy, taranja karate. Tetsy ankilany, nanamafy ny filohan’ny federasiona malagasy ny karate-do, Andrianavomanana Solofo Barijaona, fa taranja te hivoatra ny karate malagasy ka tena ilaina izao fifampizarana traikefa izao.
Araka ny fandaharam-potoana, hitohy, anio, amin’ny fampiofanana sy ny fifampizarana ny fandalovan’ireto vahiny ireto eto amintsika ka ny mpanazatra sy ny mpitsara no omena vahana. Amin’ny asabotsy izao kosa no fantatra fa hifarana izany, raha ny fanazavana hatrany. Karazana fampisehoana kely nataon’ireo ankizikely sy ny tompondaka nasionaly kosa no nanombohana ny fotoana, omaly.